SALDHIGA CIIDAMADA MAREYKANKA EE JABUUTI OO KHATARO LA SOO DARSEEN | WWW.SOMALILAND.NO
SALDHIGA CIIDAMADA MAREYKANKA EE JABUUTI OO KHATARO LA SOO DARSEEN
Posted on Juunyo 23, 2008 by weriye1
Jabuuti (sl.no) 23 june 2008 – Ciidammada Maraykanka ee la-dagaallanka argagixisada Geeska Afrika oo fadhigoodu yahay saldhigga Lemonier ee dalka Jabuuti, ayaa la sheegay inay la soo darseen khataro hor leh. Sidaa waxa daboolka ka qaadday warbixin ay soo saartay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Maraykanka maalintii Jimcihii 20 June 2008.
Horraantii sannadkan ayaa xukuumaddu Maraykanku bilowday hawlgal ay ku ballaadhinayso saldhiggeeda millateri ee ku yaal dalka Jabuuti, iyadoo dhinaca kalena maamulka Bush dedaal ugu jiro sidii uu qorshihiisa taageero ugaga heli lahaa qaaradda Afrika goobtii uu saldhig uga dhigi lahaa taliska ciidankiisa lagu magacaabo AFRICAN COMMAND, tallaabadaas ballaadhinta ah oo la filayo inay ugu yaraan laban-laabi doonto joogitaanka ciidammada Maraykanka ee Afrika oo la gaadhsiin doono ilaa 25,000 askari.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Maraykanka waxa ay dalka Jabuuti ku qiimaysay meel heerka dhinaca dembiyada aad u sarraysa oo halis ah. Xafiiska u qaabilsan Wasaaradda Khaarajiga Washington ammaanka, ayaa xustay in guryaha diblomaasiyiinta iyo ajnebiga ee Jamhuuriyadda Jabuuti ay bartilmaameed u noqdeen muwaadiniinta reer Jabuuti iyo sidoo kale dadka faraha badan ee qaxootiga ku ah dalkaas labadaba.
“Fakhri aad u qotodheer, shaqo la’aan aad u baahsan iyo korodhka tirada dadka qaxootiga ah ee ku qulqulaya Jabuuti ayaa sabab u noqday kor-u-kaca falalka dembiyada ah dhawrkii sannadood ee u dambeeyey.” Sidaa waxa lagu sheegay warbixinta dembiyada iyo ammaanka dalka Jabuuti 2008, taas oo uu soo saaray xafiiska Ammaanka Diblomaasiyiinta oo hoostaga Wasaaradda Arrimaha Dibadda Maraykanka.
Warbixintu waxa kale oo ay tilmaantay in inta badan dembiyada la soo weriyey ka mid yihiin dunuub aad u xun sida sida; isticmaalka toorriyaha ama mindiyaha iyo shuftooyin isku daya inay boobaan guryaha, safaaradaha iyo aqallada ay deggan yihiin dadka khubarada ah.
Dhinaca kale, waxay warbixintu sheegtay in si baahsan ay uga dhacaan Jabuuti falalka tuugada fudud iyo tan jeeb-siibka loo yaqaan.
“Shilalkan ayaa waxa lagu ogaaday natiijadii ka soo baxday kormeer dhinaca la socodka dunuubta ah oo lagu sameeyey guryaha, dhaqdhaqaaqa shaqaalaha iyo xaaladda nabadgelyo ee jirta,” ayey tidhi warbixintu.
“Xukuumadda iyo hoggaamiyeyaasha bulshada reer Jabuuti waxay marar badan bayaamiyeen sida xoogga ah ee ay u taageersan yihiin Maraykanka iyo xulafadiisa la-dagaallanka argagixisada caalamiga ah.”
Inkasta oo warbixintu hoosta ka xarriiqday in aanay jirin calaamado muujinaya nacayb Maraykanka ah oo ka jira dalka Jabuuti, haddana waxay ka digaysaa kor-u-kaca xadgudubyada iyo dunuubta kale ee Jabuuti, waxana taas u sabab ah bay warbixintu tidhi, ciidanka booliska oo aan ku filayn sugidda ammaanka.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Maraykanka ayaa rumaysan in kor-u-kaca dembiyada dalka Jabuuti ay ugu wacan tahay cunista qaadka oo dadka isticmaala ku dhaliyo dabeecado qallafsan.
“Rag badan oo shaqo-laawayaal ah ayaa falal tuugo ah ka fuliya suuqyada waaweyn ee magaalada Jabuuti iyo goobaha kaleba oo si joogto ah u dhaca ayaa waxay noqdaan qaar aan la baadhin.”
Warbixintu meelaha ugu halista badan ee dembiyadu ka dhacaan waxa ay ku sheegtay inay kala yihiin; Dekedda, istaanka basaska iyo faras-magaalaha caasimadda Jabuuti.
Waxa kale oo warbixintu ka digtay in xadgudbyo badan oo dhinaca siyaasadda iyo degaansho la’aan bulshada ahba ay ka qarxi karaan Jabuuti oo ah dal 65% tirada dadkiisu yihiin Soomaali, iyadoo ay jiraan xafiiltan u dhexeeya dadka Canfarta ah iyo qoomiyadaha kale ee reer Jabuuti, sidoo kalena xukuumadda ayaa ku guuldarraysatay inay bixiso mushaharooyinka iyo xuquuqda shaqaalaha iyo weliba dhibaatooyin ka jira dib-u-dhacyada ku yimaad soo dejinta qaadka.
Ugu dambayntii waxay warbixintu uga digtay socotada booqashada ku taga dalka Jabuuti inay ka taxadaraan samaynta isu-soo baxyo siyaasadeed.
“Dalka Jabuuti waa dal la jaar ah waddamo ay dagaallo halakeeyeen, awoodda dawladda oo yar awgeed ayaana hoos u dhigtay kormeerka xuduudaheeda, taas ayaana sii kordhisa werwerka laga qabo muhaajiriinta sharci-darrada u gala gudaha Jabuuti, iyadoo laga cabsi qabo in ay xuduudaha si fudud uga soo geli karaan kooxo maleegaya falal argagixiso. Ugu yaraan ilaa hadda xadka Jabuuti waxa ka dhacay fal isku dhac ah oo sababay dhaawac fudud,” ayaa lagu soo gunaanaday warbixinta ay soo saartay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Maraykanka.
« Ogeysiis muhiim ah. Shirweyne Xisbi Qaranka Kulmiye, Laanta Norway, 29.Jun.2008 Ardaydii ugu Tiro Badnayd oo u Fadhiistay Imtixaanka Shahaadiga ah iyo Jewigii Goobaha »